Mpankafy Aquarium, ho an'iza izy io ary iza no tsara indrindra? | Ny trondro
Efa nilaza tamin'ny fotoana maromaro isika fa ny tena sarotra, ary koa ny tena ilaina indrindra, rehefa manana aquarium dia mitazona mpanelanelana antonony. Midika izany fa tsy maintsy tazonina ao anatin'ny maripanan'ny mari-pana izy, miaraka amin'ny fanampian'ny mpankafy aquarium, ary amin'ny rano madio, amin'ny toe-piainana mba hahafahan'ny trondro miaina.
Androany dia hifantoka amin'ny voalohany isika, ny fomba hitazonana mari-pana marin-toerana ao anaty aquarium, zavatra sarotra indrindra amin'ny volana mafana toa ireny. Noho izany dia ho hitantsika ireo karazana mpankafy aquarium izay ahafahantsika mitazona ny mari-pana ho an'ny aquarium, ary koa torohevitra momba ny fisafidianana azy sy ny marika tsara indrindra, ankoatry ny hafa. Etsy an-danin'izany, mba hijerena marim-pototra ny mari-pana, dia ampirisihinay hiresaka momba ny tsara indrindra ity lahatsoratra ity thermometera Aquarium.
1 Mpankafy Aquarium tsara indrindra
2 Karazana mpankafy aquarium
2.1 Miaraka amin'ny termostat
2.3 Miaraka amin'ny famotopotorana
3 Marika mpankafy aquarium tsara indrindra
4 Inona no atao hoe mpankafy akondro?
5 Ahoana ny fomba hisafidianana mpankafy aquarium
5.1 Haben'ny Aquarium
5.2 Rafitra fanamafisana
6 Ahoana ny fampiasana ny mpankafy aquarium tsara
7 Mpankafy Aquarium sa mangatsiatsiaka kokoa? Inona avy ireo tombony sy tsy fitovian'ny tsirairay?
8 Aiza no hividianana mpankafy aquarium mora vidy kokoa
Mpankafy Aquarium tsara indrindra
Karazana mpankafy aquarium
Roughly, manao toy izany koa ny mpankafy rehetra, fa toy ny mahazatra foana dia misy vokatra marobe izay afaka manisy fahasamihafana sy mifanentana tanteraka aminao sy ny hazandranoo, na ny horohoro, dia lasa fako tsy dia ilaintsika loatra. Izany no antony nanangonana ireo karazana mpankafy aquarium fahita indrindra hanampy anao hahita ny fitaovana tonga lafatra.
Miaraka amin'ny termostat
Raha tsy misy isalasalana ny iray amin'ireo tena ilaina indrindra, raha tsy ny tena ilaina indrindra, indrindra raha toa ka tsy mahay na tsy vaovao amin'ny raharaha ianao. Ireo mpankafy thermostat dia manana fiasa mandeha ho azy izay maty ho azy rehefa tonga amin'ny mari-pana ilaina ny aquarium, ary ampandehanana raha mihoatra io mari-pana io.
Ny termostat sasany dia fitaovana tsy maintsy vidinao ankoatry ny mpankafy. Natao hifandray amin'izy ireo izy ireo, ary manana sensor momba ny mari-pana izay miditra ao anaty rano, mazava ho azy, mandrefy ny maripana misy azy. Ny marika lehibe amin'ny kojakoja ilaina amin'ny akiazy, toy ny JBL, dia manome soso-kevitra anao hampiasa ny thermostat anao amin'ny mpankafy ny marika fotsiny izy ireo hialana amin'ny tsy fitoviana mety hampiasaina amin'ilay fitaovana, herinaratra ...
Mpankafy mangina Ilaina izany raha manana akaikin'ny Aquarium ianao (ohatra, any amin'ny birao) ary tsy te ho lasa adala amin'ny tabataba ianao. Indraindray izy ireo dia sarotra ny mahita, na tsy manatanteraka mivantana izay ampanantenainy izy ireo, ka amin'ireny toe-javatra ireny dia tena ampirisihina mafy hijery ny hevitry ny vokatra amin'ny Internet.
Safidy iray hafa, somary mangina kokoa noho ny mpankafy, dia ny cooler rano. (izay horesahintsika avy eo), izay mihetsika mitovy, saingy tsy dia mitabataba.
Miaraka amin'ny famotopotorana
Ventera misy probe tena ilaina izany raha maodely misy termostat, satria, raha tsy izany, ahoana koa no hampihetsika ilay fitaovana? Raha ny mahazatra, ny probe dia tariby mifandraika amin'ilay fitaovana, miaraka amin'ilay detector io eo amin'ny farany, izay tsy maintsy alentika ao anaty rano ianao mba hahitana ny mari-pana.
Ho an'ireo izay tsy mila mpankafy lehibe sy ratsy tarehy dia misy kely kokoa, matetika miaraka amina endrika tena mahafatifaty sy matevina, izay tompon'andraikitra amin'ny famelomana ny rano ao anaty aquarium anao. Eny tokoa, miasa ihany amin'ny aquariums hatramin'ny habetsany (zahao amin'ny sombin'ilay maodely), satria kely kokoa izy ireo, dia tsy mahomby firy.
Marika mpankafy aquarium tsara indrindra
Hay marika telo lehibe manokana amin'ny vokatra akondro ary, indrindra indrindra, amin'ny mpankafy sy ny rafitra mangatsiaka.
Mpankafy Aquarium ...
Boyu dia orinasa miorina ao Guangdong (Sina) manana traikefa maherin'ny roapolo taona amin'ny famolavolana vokatra aquarium. Raha ny tena izy, Manana ny karazan-vokatra rehetra izy ireo, manomboka amin'ny mpankafy ka hatramin'ny mpanao gelombang, ary mazava ho azy fa aquarium maro samihafa, miaraka amina fanaka kely sy ny zavatra rehetra hahatonga azy ireo ho kanto kokoa.
Ity marika Barcelonaonan ity dia tsy nanolotra mihoatra ny kely noho ny hatramin'ny taona 1996 ka nahatonga ny aquarium sy ny vokatra natao hanatsarana ny fiainan'ireo hazandrano azon'ireo mpankafy. Mikasika ireo mpankafy, manolora iray amin'ireo fomba mora indrindra hamelombelona ny akarium eny an-tsena, ary koa ny heaters, raha sanatria mila ny vokatra mifanohitra amin'izany ianao.
Tsy isalasalana fa ny orinasa malaza indrindra sy mariky ny vokatra Aquarium miaraka amin'ny tantara lava indrindra, hatramin'ny niorenan'ny fiandohan'ny taona enimpolo tany Alemana. Inona koa, manana rafitra mangatsiaka be dia be izy ireo, ary tsy ho an'ny Aquarium kely ihany, fa manolotra vahaolana na dia ho an'ny aquarium hatramin'ny 200 litatra aza.
Inona no atao hoe mpankafy akondro?
Ny hafanana dia iray amin'ireo fahavalon'ny trondro ratsy indrindra, tsy noho izy sarotra zakaina ihany, fa satria, miaraka amin'ny hafanana, tsy dia misy oksizenina loatra ao anaty rano. Ambony, mitranga ao anaty trondro ny fizotran-javatra, satria ny hafanana no mampihetsika azy ireo ary mahatonga ny metabolisma mila oksizenina bebe kokoa hiainana. Midika izany fa raha mafana loatra ny rano dia ho mafy kokoa ny hiainan'ny trondro. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fitazonana ny mari-pana amin'ny aquarium, ary maninona isika no mila thermometre sy rafitra rivotra izay miandraikitra ny fitazonana ny rano amin'ny mari-pana mety.
Ahoana ny fomba hisafidianana mpankafy aquarium
Araka ny hitantsika teo aloha, misy karazana mpankafy maromaroHiankina amin'ny filantsika sy ny safidintsika ny mifidy ny iray na ny iray. Izany no antony nanomananay ity lisitra ity amin'ny zavatra mahazatra indrindra hodinihina rehefa mifidy ny mpankafy aquarium tonga lafatra:
voalohany, ny zavatra manan-danja indrindra hojerentsika dia ny haben'ny aquarium. Mazava ho azy fa mila mpankafy bebe kokoa, na hery bebe kokoa, ny aquariums lehibe kokoa hahafahana mitazona ny rano amin'ny mari-pana mety. Rehefa handeha hividy ny mpankafy ianao dia jereo ny fepetra voafaritra, ny ankamaroan'ny mpankafy dia manondro hatramin'ny habetsaky ny litatra ananany mangatsiatsiaka.
Ny rafitra manamboatra dia mifamatotra akaiky amin'ny mora ataon'ny mpankafy sy mivorivory. Ny ankamaroany dia manana rafitra clip izay mihantona eo an-tampon'ny aquarium mba hangatsiaka avy any ambony, iray amin'ireo fomba haingana sy mora indrindra hametahana sy hanaisotra ny mpankafy ary hitahiry azy rehefa tsy mila azy intsony isika, satria mety, miankina amin'ny toerana andao hiaina, fa isika dia mampiasa azy io mandritra ny volana mafana indrindra amin'ny taona.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny tabataban'ny mpankafy dia zavatra iray tokony hodinihina raha manana aquarium ao amin'ny birao na any amin'ny efitrano fisakafoanana ianao ary tsy te ho lasa adala. NA ny maodely tsotra indrindra dia matetika tsy manginaSafidy tena mahaliana izy io azonao zahana amin'ny famaritana ny vokatra. Amin'ity tranga ity, soso-kevitra tsara ihany koa ny hahita izay hevitry ny mpampiasa momba ny vokatra, eny fa na dia mitady horonan-tsary amin'ny YouTube aza hahitana ny toa azy.
Farany, ny hafainganam-pandehan'ny mpankafy dia mifandraika amin'ny hery. Indraindray anefa, lafo kokoa ny mividy mpankafy telo amin'ny iray mahery noho izy iray tena matanjaka, satria hampangatsiaka ny rano izy io, izay tena zava-dehibe indrindra amin'ny aquarium lehibe kokoa.
Ahoana ny fampiasana ny mpankafy aquarium tsara
Ankoatra ny mpankafy aquarium dia misy anton-javatra hafa izay manampy amin'ny fitazonana ny mari-pana amin'ny rano mety. Mba hahatratrarana izany dia araho ireto torohevitra manaraka ireto:
Tazomy ny aquarium tsy hanovozana loharano na hafanan'ny masoandro (Ohatra, raha eo akaikin'ny varavarankely io dia akatona ny ambainy). Raha azonao atao, tazomy mba hangatsiatsiaka araka izay azo atao ny efitrano fisakafoanana.
Sokafy ny fonony ambony hamelombelona ny rano. Raha ilaina dia ampidino milimetatra vitsivitsy ny haavon'ny rano mba tsy hitsambikimbikina ny trondroo.
Vonoy ny jiro aquarium, na farafaharatsiny mampihena ny ora ijanonan'izy ireo, mba hampihenana ny loharanon'ny hafanana.
Ampidiro ny mpankafy manaraka ny torolàlana momba ny vokatra. Ny tsara indrindra dia ny mametraka azy io mba hahafahany manarona rano betsaka araka izay azo atao eo an-tampony. Any amin'ny aquarium lehibe dia mety mila fonosana amina mpankafy maromaro ianao mba hahafahan'ny rano mangatsiaka mitovy.
Farany, manamarina ny thermométer imbetsaka isan'andro mba hahitana raha marina ny mari-pana. Raha tsy izany dia sorohy ny mangatsiaka ny rano amin'ny alàlan'ny fampidirana cubes-dranomandry na ny fiovana tampoka amin'ny mari-pana dia mety manasatra ny trondroo.
Mpankafy Aquarium sa mangatsiatsiaka kokoa? Inona avy ireo tombony sy tsy fitovian'ny tsirairay?
Na dia mitovy aza ny tanjonao, ny mpankafy sy ny cooler dia tsy mitovy fitaovana. Ny voalohany dia tsotra kokoa, satria izy dia misy mpankafy fotsiny na maromaro izay mampangatsiaka ny rano avy any ambony, izay manana maodely sarotra kokoa miaraka amina termostat izay mandeha ho azy na maty rehefa hitany fa tsy eo amin'ny maripana marina ny rano.
kosa, ny cooler dia fitaovana sarotra kokoa sy matanjaka kokoa. Tsy vitan'ny hoe mitazona ny aquarium anao amin'ny mari-pana mety indrindra izy io, fa afaka mitazona ny hafanana miakatra koa avy amin'ireo fitaovana hafa napetraka ao anaty aknarium. Ny cooler dia fividianana aquarium tena lehibe na tena marefo, eny, lafo lavitra noho ny mpankafy izy ireo.
Aiza no hividianana mpankafy aquarium mora vidy kokoa
Tsy dia misy firy toerana ahafahanao mahita mpankafy aquariumNy marina dia satria izy ireo dia fitaovana tena manokana izay matetika ampiasaina mandritra ny volana vitsivitsy amin'ny taona. A) Eny:
En Amazon Ao no ahitanao ireo mpankafy isan-karazany indrindra, na dia indraindray aza ny toetrany dia mamela zavatra irina. Noho izany, indrindra amin'ity tranga ity dia mamporisika anao izahay handinika tsara ny hevitr'ireo mpampiasa hafa, izay afaka hanome anao an-tsaina raha toa ka mahasoa anao ilay vokatra na tsia.
Amin'ny lafiny iray, fivarotana biby fiompy Manokana, toa ny Kiwoko na Trendenimal, dia hahita modely vitsivitsy ihany koa ianao. Ary koa, ny zavatra tsara momba ireto magazay ireto dia ny ahafahanao mandeha manokana ary mahita ny vokatra amin'ny masonao, ary manontany olona any am-pivarotana aza raha manana fanontaniana ianao.
Ny mpankafy aquarium dia afaka mamonjy ny ain'ny hazandranoo mandritra ny volana mafana indrindra amin'ny taona, miaraka amin'ny fitaovana tsy isalasalana fa fitaovana tena ilaina tokoa. Lazao anay, ahoana no fiatrehan'ny hazandranonao ny hafanana? Manana mpankafy miasa tsara indrindra ho anao ve ianao? Te hizara ny toro-hevitrao sy ny fisalasalanao amin'ny ambiny ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny trondro » Accessories » Mpankafy Aquarium